Fifa : dimy ny kandidà hifaninana ho filoha | NewsMada
Fifa : dimy ny kandidà hifaninana ho filoha
Ho fantatra, afaka iray volana, izay hitantana indray ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa). Kandidà dimy ihany no neken’ny vaomiera mpikarakara ny fifidianana hifaninana, amin’izany.
Namoaka ny anaran’ireo kandidà, afaka mirotsaka hofidina, ho filohan’ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra (Fifa), izay hatao ny 26 febroary ho avy izao, ny tomponandraikitra eo anivon’ity andrin’ny baolina kitra eran-tany ity, omaly talata. Dimy mirahalahy mianaka ny nahazo ny fankatoavan’ny vaomiera mikarakara ity fifidianana ity, amin’izany.
Anisan’ireny i Cheikh Salman Bahreïni, filohan’ny kaonfederasiona aziatika (AFC). Eo koa ilay Italianina, Gianni Infantino, sekretera jeneralin’ny UEFA. Izy no heverin’ny rehetra fa “favori”, amin’ity fifidianana ity. Hifaninana aminy koa ilay printsy jordanianina, Ali, sy ilay Frantsay, Jérôme Champagne, sekretera jeneraly mpanampy teo aloha, tao amin’ny Fifa ary ilay mpandraharaha afrikanina tatsimo, Tokyo Sexwale, izay niara-nigadra tamin’i Nelson Mandela, tamin’ny fotoan’androny. Izy irery ny kandidà tsy tao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra, amin’izy dimy.
Tsiahivina fa ny volana novambra teo, neken’ny vaomieran’ny etika ny filatsahan’izy ireo.
Marihina fa niala tsy ho mpifaninana i Michel Platini, filohan’ny UEFA, ny fiandohan’ny volana janoary, noho ny tsy fahampian’ny fotoana, taorian’ny sazy 8 taona nomena azy, noho izy nandray vola 1, 8 tapitrisa euros avy amin’i Blatter, mahakasika ny fanomezana ny «Mondial», ho an’i Afrika Atsimo sy Rosia.
Ireo firenena 209 mpikambana ao amin’ny Fifa no handatsa-bato, ny 26 febroary ho avy izao, ao Zurich, ka hahalalana izay hitondra ny Fifa indray.